Top 5 Izinto okumele uzenze On A iDemo Vakashela Ukuze Luxembourg | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Izinto okumele uzenze On A iDemo Vakashela Ukuze Luxembourg
(Kugcine ukubuyekezwa On: 03/01/2020)
Luxembourg City luyinhlanganisela imilingo zasendulo nezanamuhla kuhambisana zendawo global, ubulula okunethezeka. Akuve iphephile ukusho ukuthi nazo zonke lezi ongakhetha eclectic, akukho ithuba uzowathola ngizithola. Yingakho kwakunzima ukuba igama kuphela Top 5 izinto okumele uzenze ekuvakasheni emfushane Luxembourg. kodwa, sizokunika ke go!
1. umlando, art & Culture
Lo muzi lovely ihlinzeka lenhlanganisela ethakazelisayo emlandweni, isiko, ubuciko yemvelo namathafa. Njengoba bebaningi lamahhovisi-European Union kanye neminyango isingathwe e Luxembourg City, kukhona ngempela umbono kwamasiko amabili kulo muzi.
Nge nemibukiso yayo eminingi futhi iminyuziyamu, izinqaba futhi izinqaba, Luxembourg ihlanganisa i ezihlukahlukene Amazing izindawo ezithakazelisayo kwamasiko. Isiko nobuciko Luxembourg ibonisa bakhona kweqiniso, ahlukahlukene amaningi. Luxembourg kungenzeka ukuziqhenya imisebenzi yayo emhlabeni wonke esiyingqayizivele kwamasiko ziyahlukahluka kusuka art kanye namasiko ukuze imibukiso kanye imikhosi. Ukuze-ke lula ngawe ukuthola ezobuciko namasiko e Luxembourg, ELuxembourg ukuvakasha wadala Luxembourg Card: ukufinyelela kwamahhala ezingaphezu kuka 60 izindawo zamasiko Luxembourg kanye Region Greater.
Njengengxenye Phezulu 5 izinto okumele uzenze ekuvakasheni emfushane Luxembourg, kufanele nakanjani vakashela Letzebuerg City Museum. Museum is isezakhiweni ezine mlando. Lo mbukiso unomphela "The Luxembourg Story" sibonisa umlando eyinkulungwane ezingaphezu kuka-dolobha Grand Duchy. Eceleni izinto eziningi zokuqala, embukisweni kuveza nokuthuthukisa umuzi usebenzisa uchungechunge onobuhle ezisemadolobheni. nemibukiso lesikhashana aphethwe njalo kwamanye amazinga ezimbili Museum. Qinisekisa uhlole ukuthi kukhona uma uvakashela!
Casemates du Bock abasakwazi kalula ngaphansi castle wangaphambili, Montee de Clausen. I Bock Casemates kuyinto 17 ikhilomitha Umhubhe omude, ekuqaleni elaliqoshwe edwaleni yi Spanish phakathi 1737 futhi 1746. I casemates zaziwa ukubaluleka kwalo ngokomlando e Luxembourg, ekubeni indawo yokuhlala isikhathi esingaphezu 35,000 bendawo nezinkulungwane amasosha ngesikhathi WWI futhi WWII. Ehlanganisa amavesi emkhathini futhi idwala ezitebhisini, emhubheni mlando Casemates kuyinto UNESCO Site. Shaja labo nomakhalekhukhwini kanye ukupakisha ukuthi isikhwama. Lena okumele abonwe on Top yakho 5 izinto okumele uzenze ekuvakasheni emfushane Luxembourg!
Cologne ukuze Luxembourg Izitimela
Frankfurt ukuze Luxembourg Izitimela
Amsterdam Luxembourg Izitimela
Rotterdam ukuze Luxembourg Izitimela
3. Heritage sezenkolo e Luxembourg
Labo nesithakazelo ifa zenkolo kumelwe uvakashele Quirinus yesonto. A gothic pilgrimage yesonto elimiswe 1355 futhi ngokwengxenye aqoshiwe edwaleni. Esayithini, lapho wadalwa eyisidalwa abezizwe shrine okuyinto kamuva amaRoma akhonzwa engcwele lamaKristu okuqala. Umthombo idwala okhuphuka lapha. Abantu okuthiwa laqanjwa amandla nenzuzo elapha amanzi ayo uma iso izifo.
Kusukela ngekhulu le-11, isayithi ehlukaniselwe Saint Quirin futhi kusukela ekuqaleni 13, amasevisi yaqhutshelwa ezimbili emihumeni yesonto.
I Gothic pilgrimage yesonto elimiswe 1355, ngenkathi ophahleni kanye ezincane insimbi-kwemibhoshongo kwanezelwa kamuva, ekupheleni kwekhulu le-19.
Isonto St Michael sika esontweni endala e Luxembourg idolobha yabhujiswa futhi kabusha izikhathi eziningana phakathi namakhulu eminyaka edlule. Isonto Saint Michel sika ingenye izakhiwo zenkolo endala e Luxembourg. Sakhiwo umlando sihlehlela emuva 1987 lapho Ukubala of Luxembourg yamisa indlwana encane ngaphakathi ngezizathu zakhe castle. Ibandla samanje ihlanganisa esithile sokunakekelwa Romanesque ne timphawu tesakhiwo Gothic futhi Baroque Imihlobiso yangaphakathi. Phawula nemengamo ezicijile e kwethempeli. Elikhulu amafasitela ahlotshiswe ngokweqile ibala. Kuthiwa imibhalo eminingi ye ukubaza zenkolo. And the huge Assumption of the Virgin painting mounted upon the Baroque altar.
4. Palais Grand-Ducal ekuvakasheni emfushane Luxembourg
Uma izakhiwo into yakho, ke Palais Grand-Ducal idinga ukuba ingxenye Phezulu 5 izinto okumele uzenze ekuvakasheni emfushane Luxembourg. Njengoba yokuhlala yokuqala Grand Duke futhi umndeni wasebukhosini, Grand Ducal Palace e Luxembourg City isiqeshana umbukwane bokwakha, eyakhelwe Ekhulwini le-16 ngesikhathi lase Renaissance. Umklamo sigodlo ingaphakathi libonakala Ukuhlangana yohlobo ezihlukahlukene izitayela. A interplay ebucayi romantic nesitayela ephakathi-gothic, nezezimboni ukukhanya imiklamo yi German umklami zezimboni – Ingo Maurer.
5. INdlu Chocolate e Luxembourg City
I Chocolate yetivakashi ekhatsi Luxembourg is for ushokoledi yayo yebo eyaziwa. Kodwa, ngaphezu kwazo Ukulunywa amnandi futhi ezihlukahlukene amakhekhe, ungase futhi ukujabulela ophaya yabo elungisiwe futhi salads. Lapho ithala ugcwele, you can always sit inside on the ground floor or upstairs.
INdlu Chocolate iseningizimu phambi Grand Ducal Isigodlo. Ngakho thatha esihlalweni sakho futhi ujabulele Hotchocspoon. Siyaqiniseka uyokwenza Chocolate House indawo zakho ozithandayo. abangasoze balukhohlwa, isipiliyoni oluyihaba, kuzo zonke izici.
Ukuze uthole imali eyengeziwe fun, ungaphuthelwa Summer eMzini Festival. Kuthatha indawo kusukela ekupheleni kuka-June kuze ekuqaleni September. Phakathi nale nkathi unga ukujabulela amakhonsathi khulula, izimakethe, nemibukiso kanye nemidlalo izenzakalo kulo lonke idolobha.
Catch a train to Luxembourg using SaveATrain! I esheshayo elula indawo ukubhuka uhambo lwakho emhlabeni Europe.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / tr ukuba / noma / de futhi ngezilimi ezingaphezu.